भारतीय टिभीमा नेपालिले कोरोना फैलाउने षड्यन्त्र गर्दै भनेर प्रशासरण , – Ranga Darpan
चैत २९ ,काठमान्डौ – भारतिया टिभी च्यानलले नेपालले कोरोना फैलाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै बहुत बडि खबर भनेर प्रशारण गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको बोर्डरमार्फत भारतमा कोरोना फैलाउने भीषण षडयन्त्र भएको ‘सनसनीपूर्ण खुलासा’ उक्त समाचारमा गरिएको छ । यो समचारमा भने भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएबी) को हवाला दिइएको छ ।
इन्डिया टुडेले यस विषयमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बिहारको पश्चिमी चम्पारण जिल्लाका डीएम (डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट) र प्रहरीका एसपीलाई लेखेको पत्र देखाएको छ ।
उक्त पत्र ४७ औं बाहिनी बटालियन सीमा सुरक्षा बल पनटोका रामगढवाका कमाण्डरले लेखेका हुन् ।
पत्रमा नेपालको पर्सा जिल्लाका जगरनाथपुर गाउँपालिकाका जालिम मुखियाले भारतमा कोरोना फैलाउने षडयन्त्र गरिरहेको सूचना आएको दाबी गरिएको छ ।
अत्यन्त विश्वस्त सूत्रहरुबाट प्राप्त सूचनाअनुसार पर्सा जिल्ला (नेपाल), जानकी टोला, जगन्नाथपुर गाउँका जालिम मुखिया नाम गरेका एक व्यक्ति भारतमा कोरोनाको महामारी फैलाउने योजना बनाइरहेका छन् ।
उनी नेपालबाट अवैध हातहतियार र नक्कली नोटको भारतमा ओसारपसार गर्नसमेत संलग्न छन् ।
यसका साथै, उनले लकडाउनका क्रममा विभिन्न मुस्लिम देशमा काम गरिरहेका भारतीय मुस्लिम नागरिकलाई सीमा पार गराउने जिम्मेवारी पनि लिएका छन् ।
सूत्रका अनुसार ५–६ जना पाकिस्तानी नागरिकसहित दुई सय जनाजति भारतीय मुस्लिम (मुस्लिम राष्ट्रमा काम गरिरहेका) नेपाल आएका थिए र उनीहरु अहिले चन्दनबस्रा र खैरवा गाउँमा रहेका मदरसाहरुमा बसिरहेका छन् ।
सुत्रका अनुसार ४०–५० संदिग्ध भारतीय मुस्लिम नागरिकहरु आज आइपुग्ने छन् र आगामी दिनमा अरु धेरै आउन सम्भावना छ ।
सूत्रका अनुसार यी नागरिकहरुले शरीरको तापक्रम घटाउन प्यारासिटामोल ट्याबलेट खाइरहेका छन् र उनीहरु कोरोना पोजिटिभ हुन सक्छन् ।
तपाईंको सूचनाका लागि यो पत्र प्रेषित गरिएको छ र सरोकारवाला निकायका साथै नेपालको जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरुलाई सतर्क तुल्याउन अनुरोध गरिन्छ ।’
एसएसबीको यही पत्र समावेश गर्दै पश्चिम चम्पारण, बेतियाका जिल्ला पदाधिकारी कुन्दन कुमारले बेतिया प्रहरीलाई अर्को पत्र लेखेका छन् ।
उक्त पत्रमा नेपाल–भारत सीमामा यथेष्ट सतर्कता अपाउन र सन्दिग्ध गतिविधिलाई कडा निगरानी गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै, नेपालसँग सीमा जोडिएका सात जिल्लाका एसपीहरुले थानेदारलाई चिठ्ठी लेख्दै भारत र नेपालका गुप्त बाटोहरुमा नजर राख्न भनेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँ हुन् । उनी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।
मधेसी समुदायमा गाउँका अगुवालाई मुखिया भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । त्यसैले एसएसबीले ईंगित गरेका व्यक्ति उनै अध्यक्ष जालिम मियाँ नै भएको अनुमान गरिएको छ ।
एसएबीले उनी जाली नोट र अवैध हतियार ओसारपसारमा संलग्न रहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । उनी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट नेता हुन् ।
उनी विगतमा काठ तस्करीलगायत केही विवादमा मुछिए पनि जाली नोट र अवैध हतियारको कारोबारमा संलग्नताबारे पर्साको प्रहरी स्रोतले अनभिज्ञता दर्शायो ।
भारतीय मिडियाले आफ्नो तस्वीर राख्दै समाचार प्रशारण गरेपछि मियाँले फेसबुकबाट संक्षिप्त प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
त्यसमा उनले भनेका छन्, ‘(भारतसँग) हाम्रो मित्रताको सम्बन्ध छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । जालिम मियाँले यस्तो षड्यन्त्र गर्ने कारण के छ ?
चाइनामा जालिम मियाँले कोरोना फैलाएको हो ? अमेरिका, फ्रान्स, इटली सारा देशमा जालिम मियाँले फैलाएको हो ? यो संकटको समयमा केही राजनीतिक व्यक्तिबाट मेरो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको छ ।
कि ममाथि लागेको आरोप प्रमाणित गरियोस्, सजाय भोग्न तयार छु । होइन भने ममाथि षड्यन्त्र गर्नेहरुलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारसँग माग गर्छु। यस विषयमा मैले गृह मन्त्रालयलाई एसएमएस पठाएको छु । जिल्लाका सीडीओसँग पनि समन्वय गर्नेछु ।’
जगरनाथपुर गाउँपालिकाले आजै एउटा विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय मिडियामा प्रशारित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अमितकुमार गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै तथ्य–प्रमाणविना नेपाली नागरिकको चरित्र हत्या गरिएको भन्दै यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दूतावाससँग खेद प्रकट गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अहिले नेपाल र भारत दुबै देशमा पूर्ण लकडाउन छ । भारतपट्टि अझै बढी कडाई छ किनकी उनीहरुसँग एसएसबी धेरै संख्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा कसैलाई लुकिछिपी नेपालबाट सीमा पार गराउन सम्भव नै छैन ।
एसएसबीले छिर्न दिन्छन् र ? त्यसैले यो आधारहीन कुरा हो । जिल्लामा हामीले लकडाउन कडाईका साथ पालना गराइरहेका छौँ। यसका लागि हामीलाई कसैको पत्र आउनै पर्दैन । हामी सतर्क नै छौँ । जिल्लाका सबै गाउँपालिकासँग निकट रहेर काम गरिरहेका छौँ ।’
पहिले चाहिँ लुकिछिपी आउने गरेका थिए । केही दिनअघि जालिमजीको गाउँमा भारतबाट लुकिछिपी आएका केही मुस्लिम नेपालीलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ ।
त्यही आधारमा उनीहरुले शंका गरेका हुन् कि ? उनीहरुलाई हामीले पर्सामा एक दिन क्वारेन्टाइन राखेर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकेका छन् ।
उनीहरुमध्ये १४ जना रौतहटका, १३ जना सप्तरीका र ८ जना बाराका थिए । उनीहरु सबै अहिले आआफ्नै जिल्लामा क्वारेन्टाइनमा छौँ ।
पर्साका व्यक्तिहरुलाई चाहिँ हामीले यहीँ क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ । उनीहरु दिल्लीमा भएको जमातमा भाग लिएर आएका हुन् कि भनेर स्थानीय समुदाय पनि सतर्क छन् ।’
गत १८/१९ गते करिब पाँच सयको संख्यामा भारतीयहरु रक्सौलतर्फ जान आएका थिए । तर, लकडाउनले रोकिए । उनीहरुमध्ये एक सय ८९ जना भारतीयलाई पर्सा जिल्ला प्रशासनले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ ।
बाँकी चाहिँ नजिकै रहेका आफ्ना आफन्तकहाँ गएको सहायक सीडीओ बस्नेतले जानकारी दिए । यसरी रोकिएकाहरु मुसलमान मात्र होइनन् । प्राय ज्याला-मजदुरी गर्नेहरु छन् ।
भारतीय नागरिकहरुलाई ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा राखिएको छ । उनीहरुलाई तीन टाइम खान दिइन्छ ।
भारतबाट नेपाल आउन खोज्नेलाई पनि भारतले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ । तर, आफूहरुलाई नारकीय अवस्थामा राखिएको नेपालीहरुले बताएका छन् ।अनलाईन खबरबाट ,
कोरना संक्रमित केहि दिनमा डिस्चार्ज हुँदै ,